Igqityelwe ukuvuselelwa nge-5/25/2018
Lo mgaqo-nkqubo wabucala ucacisa indlela i-NATVISA.COM eqokelela, isebenzise kwaye yabelane ngayo ngolwazi malunga nokusebenzisa kwakho i-NATVISA.COM, iinkonzo zethu, kunye nokusetyenziswa kwethu (ngokudibeneyo, "Iinkonzo") kunye nge-imeyile, isicatshulwa, kunye nolunye unxibelelwano lwe-elektroniki phakathi wena kunye NATVISA.COM. Lo mgaqo-nkqubo wabucala ("Umgaqo-nkqubo wabucala") awusebenzi kulwazi abathengi bethu okanye iindwendwe zewebhusayithi zinokuziqhubela ngokwabo xa besebenzisa iinkonzo zethu.
Lo Mgaqo-nkqubo wabucala uqala ukusebenza nge-25 kaMeyi, 2018. Olu tshintsho lwenziwe ukwenzela ukuba luhambisane ne-GDPR. Siyayihlonipha imfihlo yakho kwaye sizimisele ukuyikhusela ngokuthobela lo mgaqo-nkqubo.
Lo mgaqo-nkqubo usebenza kulwazi esiluqokelelayo:
kwiwebhusayithi yethu nangokusetyenziswa kweeNkonzo zethu;
nge-imeyile, isicatshulwa, kunye neminye imiyalezo ye-elektroniki phakathi kwakho newebhusayithi yethu (kubandakanya neenkonzo zethu zenkxaso yezobugcisa);
Ayisebenzi kulwazi oluqokelelwe ngu:
nathi ngaphandle kwe-intanethi okanye ngayo nayiphi na enye indlela, kubandakanya nakweyiphi na iwebhusayithi esebenza yi-NATVISA.COM okanye nayiphi na into yesithathu; okanye
Nawuphina umntu wesithathu, kubandakanya nasiphi na isicelo okanye umxholo onokunxibelelana okanye ufikeleleke kwiwebhusayithi okanye kwiimveliso zethu.
Nceda ufunde le polisi ngocoselelo ukuze uqonde imigaqo-nkqubo yethu kunye nezinto esizenzayo ngokubhekisele kulwazi lwakho nendlela esiya kuyiphatha ngayo. Ukuba awuvumelani nemigaqo-nkqubo kunye neenkqubo zethu, ukhetho lwakho kukungasebenzisi iwebhusayithi yethu kunye / okanye ukungasebenzisi iinkonzo zethu. Ngokufikelela okanye ukusebenzisa le webhusayithi okanye ukuthenga iinkonzo zethu, uyavumelana nale Mgaqo-nkqubo wabucala. Lo Mgaqo-nkqubo wabucala unokutshintsha amaxesha ngamaxesha. Ukuqhubeka kwakho ukusebenzisa le webhsayithi kunye nokuqhubeka kokusebenzisa iiNkonzo zethu emva kokuba senze utshintsho kuthathwa njengolwamkelo olo tshintsho, nceda ujonge lo Mgaqo-nkqubo wabucala rhoqo ukuze ufumane uhlaziyo.
Luluphi ulwazi esiluqokelelayo?
Siqokelela iintlobo ezahlukileyo zolwazi malunga nawe, kubandakanya ulwazi olunokuthi lukuchaze ngqo, ulwazi malunga nawe kodwa umntu angakuchazi ngokobuqu, kunye nolwazi esiludibanisa nabanye abasebenzisi bethu. Oku kubandakanya ulwazi esiluqokelela ngqo kuwe okanye ngetekhnoloji yokuqokelela ezenzekelayo.
Siqokelela iintlobo ngeentlobo zolwazi ezivela kwaye malunga nabasebenzisi beenkonzo zethu kunye newebhusayithi, ngakumbi ulwazi:
Unokuchongwa buqu, njengamagama, idilesi yeposi, idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba kunye nayo nayiphi na enye into ekuchongwa ngayo kwi-Intanethi okanye ngaphandle kweintanethi ("Idatha yakho");
Imalunga nawe kodwa ngokukodwa azichonganga, njenge datha yokugcwala kwiwebhusayithi, idatha yendawo (ngedilesi ye-IP), iilog, ukubhekisa / ukuphuma kwamaphepha, umhla kunye nexesha lotyelelo lwakho kwiwebhusayithi, ulwazi ngempazamo, ucofe idatha, kunye nokunye idatha yonxibelelwano kunye nezixhobo ongena kuzo kunye nokusebenzisa kwiwebhusayithi; kunye / okanye
malunga nonxibelelwano lwakho lwe-Intanethi, izixhobo ozisebenzisayo ukufikelela kwiwebhusayithi yethu kunye neenkcukacha zokusebenzisa.
Siqokelela le ngcaciso:
ngqo kuwe xa usibonelela kuthi;
ngokuzenzekelayo njengoko ujikeleza kwindawo. Ulwazi oluqokelelwe ngokuzenzekelayo lunokubandakanya iinkcukacha zokusetyenziswa (kubandakanya inani lofakelo lweemveliso ozithengileyo), iidilesi ze-IP, kunye nolwazi oluqokelelwe ngekiokhi, uhlaziyo, kunye nobunye ubuchwepheshe bokulandela umkhondo; kwaye
Ukusuka kwiqela lesithathu.
Ulwazi olunikezwe Nguwe
Olu lwazi esiqokelela kuyo okanye lisebenzisa iwebhusayithi yethu:
Bhaliso. Xa usenza iakhawunti kwi-NATVISA.COM, siqokelela ulwazi kuphela olwaneleyo lokuhlawula iakhawunti yomsebenzisi, enjengedilesi ye-imeyile, igama lomsebenzisi elifunekayo, igama eligqithisiweyo kunye negama lokubonisa (okt isiteketiso). Iphasiwedi yakho ifihliwe kwaye ayikaze igcinwe naphi na kwiteksti ecacileyo. Sikwagcina idilesi yakho ye-IP kwindawo yethu yedatha ngenjongo yokulandelela iakhawunti ezingalunganga. Uyakwazi, ngokubona kwakho, ukuhlaziya iakhawunti yakho kunye nolwazi lweprofayili ukongeza idatha malunga nawe, enje ngedilesi, umnxeba, i-avatar, kunye nezinye iipropathi ezifanayo zeprofayili.
Iifom. Ulwazi olunikezela ngokugcwalisa iifom kwiwebhusayithi yethu. Oku kubandakanya ulwazi olunikezelweyo ngexesha lokubhalisa ukusebenzisa iwebhusayithi yethu, ukuthumela izinto, ukuthenga iinkonzo, okanye ukucela ezinye iinkonzo (ezinje ngenkxaso yezobugcisa). Sinokubuza nolwazi xa uxela ingxaki kwiwebhusayithi yethu.
Ulwazi lwentlawulo. Xa uthenga imveliso okanye inkonzo ngeNATVISA.COM, sisebenzisa i-PayPal. Asigcini okanye sigqibe idatha yakho yamakhadi anovakalelo kwiseva yethu. Ulwazi olusisiseko malunga nendlela yakho yokuhlawula lugcinwe kwiPayPal kunye neerekhodi zakho kwiakhawunti yakho okanye kwimbali yokuthenga.
Unxibelelwano. Ukuba unxibelelana nathi, sinokufumana ulwazi olongezelelekileyo malunga nawe, njengegama lakho, idilesi ye-imeyile, inombolo yomnxeba, okanye naluphi na olunye ulwazi olunxulumene ngokuthe ngqo nomyalezo owuthumeleyo. Oku kubandakanya iirekhodi kunye neekopi zembalelwano yakho (kubandakanya idilesi ye-imeyile), ukuba unxibelelana nathi.
Ukusetyenziswa. Sinikezela ngeempawu kule ndawo, ezinjengeebhukumaka kwizifundo zethu, esizigcinayo iirekhodi zedatha yethu.emibuzo yokukhangela kwiWebhusayithi.
Iinkcukacha zoBuqu esiziqokelele kuwe ziyacelwa ukuba ungene kwimvumelwano ne-NATVISA.COM, ye-NATVISA.COM ukuyenza phantsi kwenkonzo eceliweyo, nokubonelela ngeenkonzo zethu. Ukuba uyala ukubonelela ngeDatha yoBuntu okanye urhoxise imvume yakho ekusetyenzisweni kweDatha yoBuntu, ke asinakuba nakho ukufezekisa izibophelelo zethu kuwe.
Ulwazi oluhambelana neeNkonzo zethu
Iicookies, ii-Analytics, kunye nokuLanda umkhondo. Ulwazi oluthile lugcinwa ngokuzenzekelayo kwiifayile ze-log. Sisebenzisa iGoogle Analytics yokulandela umkhondo, kunye nolwazi olufana nesixhobo sakho, udidi lwesikhangeli, umboneleli ngenkonzo ye-intanethi, ukubhekisa nokuphuma kwamaphepha, imihla, amaxesha, kunye nokucofa, idilesi ye-IP, kunye nenye idatha eqhelekileyo esetyenziswa kwaye ithunyelwa kwezi nkonzo ngokuzenzekelayo. Olunye ulwazi lugcinwe kwikuki, enokuseta kwikhompyuter yakho okanye kwisixhobo xa undwendwela i-NATVISA.COM. Oku kusivumela ukuba sikubone kwaye sibonelele ngeenkonzo kwaye sifunde ukuthanda kwakho.
Senza ntoni ngolwazi esiluqokelelayo?
Asabelani, sithengise, okanye sikhuphe ezinye iinkcukacha zeenkcukacha zakho ngaphandle kwezo zichazwe kulo Mgaqo-nkqubo wabucala. Nangona kunjalo, sinokuveza ulwazi oluhlanganisiweyo malunga nabasebenzisi bethu, kunye nolwazi olungachongi mntu, ngaphandle kokuthintelwa.
Sithobela ngokupheleleyo izibophelelo phantsi kwe- "GDPR":
ngokugcina idatha yakho yobuqu isesikolweni;
ngokugcina nangokutshabalalisa ngokukhuselekileyo;
ngokuqokelela okanye ukugcina oko sikufunayo;
ukukhusela idatha yakho buqu ekulahlekelweni, ekusebenziseni gwenxa, ukufikelela okungagunyaziswanga kunye nokuxelwa;
ngokuvavanya iinkqubo zokhuseleko rhoqo ukuqinisekisa amanyathelo awona akhoyo afanelekileyo okukhusela idatha yobuqu;
ukuhlala uthobelana, kubandakanya nokunyanzelisa imiMiselo neMiqathango yethu, okanye amanye amalungelo asemthethweni, okanye njengoko kunokufunwa yimithetho efanelekileyo kunye nemigaqo ecelwe yiyo nayiphi na inkqubo yezomthetho okanye iarhente karhulumente.
Sisebenzisa idatha yakho kuphela:
ukuhambisa iwebhusayithi yethu kunye neziqulatho zayo kuwe;
ukukunika ulwazi, iinkonzo ozifunayo kuthi;
ukukunika ulwazi malunga neenkonzo ozithengileyo kuthi;
ukuzalisekisa nayiphi na enye injongo osinike yona;
ukukunika izaziso malunga neakhawunti yakho, kubandakanya ii-invoice, kunye neerisithi;
ukwenza izibophelelo zethu kunye nokunyanzelisa amalungelo ethu avela kuzo naziphi na iimvumelwano ekungenwe phakathi kwakho nathi, kubandakanya ukuhlawula nokuqokelela;
ukukwazisa malunga notshintsho okanye uhlaziyo kwiwebhusayithi yethu okanye iinkonzo ozithengileyo okanye esinikezela okanye esikunikezela nangona iwebhusayithi yethu;
ukuvumela ukuba uthathe inxaxheba kwizinto ezisebenzayo kwiwebhusayithi yethu;
Ukunxibelelana nawe, xa kufanelekile, malunga noku-odola ii-odolo okanye ezentengiselwano;
ngayo nayiphi na enye indlela esingayichaza xa usinika ulwazi;
ngayo nayiphi na enye injongo ngemvume yakho.
ukubonelela, ukusebenza, kunye nokugcina iinkonzo zethu;
ukuphucula, ukwenza ubuntu, nokwandisa iinkonzo zethu kunye namava akho;
ukuqonda indlela oyisebenzisa ngayo inkonzo yethu, ukuze sikwazi ukuyenza ngcono;
ukufumana ingcaciso ukwenza amanqaku kunye neenkonzo ezintsha;
ukuqhubela phambili imicimbi yakho, xa uthenga;
ukufumana nokukhusela ubuqhetseba;
Ukunxibelelana nawe nge-imeyile ngolwazi olubalulekileyo olunxulumene neakhawunti, njengokuhlaziya imigaqo-nkqubo yethu; kwaye
Singayiveza idatha yakho:
ngeprosesa yethu yokuhlawula xa uthenga;
ngeGoogle, kunye neenjongo zohlalutyo ukuze sikwazi ukubaqonda ngcono abasebenzisi bethu kunye nendlela abayisebenzisa ngayo iNATVISA.COM;
kunye nababoneleli bethu beenkonzo, ezichazwe ngezantsi;
ukuthobela nawuphi na umthetho wenkundla, umthetho, okanye inkqubo yezomthetho, kubandakanya ukuphendula nakuphi na urhulumente okanye isicelo somthetho;
ukunyanzelisa okanye ukusebenzisa imiGaqo yethu kunye neMiqathango kunye nezinye izivumelwano, kubandakanywa ukubizwa kweenjongo kunye nokuqokelela; kwaye
ukuba sikholelwa ukuba ukuchaza kubalulekile okanye kufanelekile ukukhusela amalungelo, impahla, okanye ukhuseleko lwe-NATVISA.COM, abathengi bethu, okanye abanye. Oku kubandakanya ukutshintshana ngolwazi nezinye iinkampani kunye nemibutho ngeenjongo zokukhusela ubuqhetseba kunye nokuncitshiswa komngcipheko wetyala.
Ukongeza koku kungasentla:
Sisebenza kunye nenkampani yokubamba, apho iiseva zethu kunye nenye idatha enxulumene nayo igcinwa khona. Ii-backups zedatha zigcinwa ngenjongo yokubuyisela intlekele.
Sabelana ngobungqina bakho, ngemvume.
Kwiimeko ezizodwa, singabelana ngolwazi ngawe nomntu wesithathu ukuba sikholelwa ukuba ukwabelana ngesizathu esifanelekileyo (a) kukuthobela nawuphi na umthetho osebenzayo, umgaqo, okanye inkqubo yezomthetho okanye isicelo sikaRhulumente welizwe, (b) sokunyanzelisa IMigaqo neMiqathango yethu, (c) ukukhusela kwimisebenzi engekho mthethweni, okanye (d) ukuphendula kwimeko kaxakeka ukuba sikholelwa ukuba ukwabelana ngolwazi olunjalo kungathintela ukufa okanye ukwenzakala emzimbeni.
Sithini isiseko sezomthetho sokuqhubekeka Idatha yakho?
Usinike imvume ecacileyo, okanye uthenge enye yeeNkonzo zethu kunye nokuphumeza inkonzo yethu kuwe kufuneka sigcine iinkcukacha zakho zoqhagamshelo.
Ukuba ukwi-European Union, ukuqhubekeka kweDatha yoBuntu kusemthethweni kuphela xa kuvunyelwe phantsi kwemithetho efanelekileyo yokukhuselwa kwedatha. Sinesiseko esisemthethweni semisebenzi yethu nganye yokwenza izinto (ngaphandle kwalapho kusebenza ngaphandle njengoko kuchaziwe ngezantsi):
imvume. Ngokusebenzisa iwebhusayithi yethu, uyavuma ukuqokelelwa kwethu, ukusebenzisa, kunye nokwabelana ngeDatha yoBuntu njengoko kuchaziwe kulo mgaqo-nkqubo wabucala. Ukuba awuvumi lo mgaqo-nkqubo wabucala, nceda ungasebenzisi iwebhusayithi.
Inzala esisemthethweni. Siza kuyiqhubela idatha yakho yobuqu njengoko iyimfuneko kwiminqweno yethu esemthethweni. Inzala yethu esemthethweni ilungelelene kumalungelo akho nenkululeko yethu kwaye asizicwangcisi iiNkcukacha zobuqu ukuba amalungelo akho neenkululeko zakho zigqithile kwimicimbi yethu esemthethweni. Ngokukodwa umdla wethu osemthethweni kukuba: uququzelele unxibelelwano phakathi kweNATVISA.COM kunye nawe; ukubona nokulungisa iibugs kunye nokuphucula iwebhusayithi yethu kunye neenkonzo; ukukhusela izixhobo zethu ze-IT kunye nepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda; fumana kwaye uthintele ubuqhetseba kunye nolunye ulwaphulo-mthetho (kubandakanya ukusetyenziswa gwenxa kwepropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda); ukukhuthaza kunye nokuthengisa ishishini lethu; ukwenza uvavanyo lomngcipheko; kwaye siphuhlise imveliso yethu kunye neenkonzo.
Ukuphumeza iiMfanelo zethu kuwe phantsi kweKontrakthi yethu. Siqhubela phambili idatha yakho yobuqu ukuze sizalisekise izibophelelo zethu kuwe ngokwesivumelwano sethu nawe ukuze sizise iinkonzo zethu kuwe. Ngokukodwa, sisebenzisa ulwazi lwakho lokunxibelelana ukukubonelela ngeemveliso, izitshixo zeelayisensi, kunye neenkonzo zenkxaso oyalela zona kuthi.
Njengoko kufunwa nguMthetho. Sinokuphinda sisebenzise idatha yakho yobuqu xa sifunwa okanye sivunyelwe ngumthetho; ukuthobela uvavanyo lukarhulumente welizwe, uphicotho, kunye nezinye izicelo ezifanelekileyo ezivela kurhulumente okanye ezinye iziphathamandla zikarhulumente; ukuphendula kwinkqubo yezomthetho enje nge-subpoenas; okanye njengoko kunyanzelekile ukuba sikhusele izinto esinomdla kuzo okanye sisebenzise amalungelo ethu asemthethweni kunye noluleko (umzekelo, xa kufanelekile ukunqanda okanye ukubona ubuqhetseba, ukuhlaselwa kuthungelwano lwethu, okanye ezinye izinto ezenziwayo ngolwaphulo-mthetho kunye nokuzikhusela), ukukhusela isimangalo, nokulawula izikhalazo okanye amabango .
Amalungelo akho malunga nolwazi lwakho kunye nokufikelela kunye nokulungisa ulwazi lwakho
Imithetho esetyenziswayo yokhuselo lwedatha inokukubonelela ngamalungelo athile ngokubhekisele ekusebenzeni kweDatha yakho.
Fikelela kwaye Uhlaziye. Ungajonga kwaye utshintshe iNkcukacha zobuqu ngokungena kwiWebhusayithi kwaye undwendwele iphepha elithi “iAkhawunti yam”. Ungasazisa ngolwazi loqhakamshelwano ngeDesika yethu yeNkxaso ngazo naziphi na iinguqu okanye iimpazamo nakweyiphi na iNkcukacha zoBuntu esinazo ngawe ukuqinisekisa ukuba igqibelele, ichanekile, kwaye ikho njengangoku. Sisenokungasamkeli isicelo sakho ukuba siyakholelwa ukuba siyaphula nawuphi na umthetho okanye imfuneko yomthetho okanye sibangele ukuba ulwazi lungachanekanga.
izithintelo. Unelungelo lokunciphisa umda ekusebenzeni kweDatha yakho buqu phantsi kweemeko ezithile. Ngokukodwa, unokucela ukuba sikunqande ukusetyenziswa kwethu ukuba uphikise ukuchaneka kwayo, ukuba ukuqhubekiswa kweData yoKho kugqitywe ekubeni kungabikho semthethweni, okanye ukuba asisafuni Idatha yakho yobuqu ukuze ilungiswe, kodwa siyigcinile njengoko ivumelekile ngomthetho.
UkuPhatha. Ukuya kuthi ga kwiNkcukacha zoBuntu oyinikezelayo i-NATVISA.COM iqhubekeke ngokusekelwe kwimvume yakho, unelungelo lokucela ukuba sikunike ikopi, okanye ukufikelela kuyo, yonke okanye inxenye yolwazi olufana nolwakho kuLwazi, olwasetyenziswa ngokufuthi kunye nomatshini. Ifomati efundekayo
Ukurhoxiswa kweMvume. Ukuya kuthi ga apho kuthi ukuqhubekiswa kweDatha yobuNtu isekwe kwimvume yakho, unokurhoxisa imvume yakho nangaliphi na ixesha ngokuvala iakhawunti yakho. Ukurhoxisa imvume yakho akuchaphazeli ukuba semthethweni kokusetyenzwa okusekwe kwimvume yakho ngaphambi kokuba urhoxise, kwaye ayizukuchaphazela ukuba semthethweni kokuqhubekeka kwethu kusekwe kusekwe nakuphi na okunye okusemthethweni okuqhubela phambili idatha yakho.
Ilungelo lokuxolelwa. Unelungelo lokucela ukuba sicime yonke idatha yakho. Asinako ukuyicima iNkcukacha zobuqu ngaphandle kokucima iakhawunti yakho yomsebenzisi, kwaye siya kucima iakhawunti yakho kuphela xa singasenasizathu sasemthethweni sokufaka idatha yakho yobuqu okanye emva kokugqitywa kokugqibela kokuba Idatha yakho yobuqu yenziwe ngokusemthethweni. Asinakusamkela isicelo sokucima ulwazi ukuba sikholelwa ukuba ukucinywa kungaphula nawuphi na umthetho okanye umthetho osemthethweni okanye ukubangela ukuba ulwazi lungachanekanga. Kuzo zonke ezinye iimeko, siya kuyigcina iNkcukacha zobuqu njengoko zichaziwe kulo mgaqo-nkqubo. Ukongeza, asinakukwazi ukuyicima ngokupheleleyo idatha yakho yobuqu njengoko idatha ethile inokuphumla kwizipele zangaphambili. Oku kuya kugcinwa kangangexesha elimiselweyo kwimigaqo-nkqubo yethu yokubuyisela kwintlekele.
Izikhalazo. Unelungelo lokufaka isikhalazo kwigunyabantu eliphetheyo elihlala kulo, ilizwe osebenza kulo, okanye ilizwe okholelwa kulo ukuba amalungelo akho aphantsi kwemithetho ekhuselayo. Nangona kunjalo, ngaphambi kokwenza njalo, sicela ukuba unxibelelane nathi ngqo ukuze usinike ithuba lokusebenza ngqo nawe ukusombulula nayiphi na inkxalabo malunga nemfihlo yakho.
Ungawasebenzisa njani Amalungelo akho. Ungasebenzisa nawaphi na ala malungelo angasentla ngokunxibelelana nathi ngokusebenzisa naziphi na iindlela ezingezantsi. Ukuba unxibelelana nathi ukuze usebenzise naliphi na amalungelo achazwe kwangaphambili, sinokukucela ulwazi olongezelelekileyo lokuqinisekisa isazisi sakho. Sinelungelo lokunciphisa umda okanye ukusikhaba isicelo sakho xa usilele ukunikezela ngolwazi olwaneleyo lokuqinisekisa isazisi sakho okanye ukwanelisa iimfuno zethu zomthetho nezeshishini.
Siza kugcina idatha yakho yobuqu ngalo lonke ixesha ugcina i-akhawunti yakho ivulekile okanye xa sineshishini eliqhubayo kufuneka senjenjalo. Umzekelo, kusenokufuneka sikunike inkonzo oyicelileyo okanye uhambelane nomthetho ofanelekileyo, irhafu, okanye iimfuno zobalo. Emva kokuyivala iakhawunti yakho kwaye ucele ulwazi lwakho ukuba icinywe, sinokugcina idatha yakho yobuqu:
ixesha elide njengoko kufuneka kuthotyelwe nayiphi na imfuneko yomthetho;
kwiinkqubo zethu zokugcina nokulungisa intlekele ngokungqinelana nemigaqo-nkqubo yethu yokulondolozwa kwentlekele kunye nemigaqo-nkqubo;
ixesha elide njengoko kufuneka sikhusele iimfuno zethu zomthetho okanye sisebenzise amalungelo ethu asemthethweni kunye noluleko; kwaye
Idatha edityanisiweyo okanye engenye engaziwayo ngendlela yokuba ungasachazeki, ngokungenasiphelo.
Xa kungekho mfuneko isemthethweni yokuqhubekeka ulwazi lwakho, siya kuyicim 'igama okanye singachazanga, okanye ukuba oko akunakwenzeka, njengakwicala le-backups, siya kulishiya ngaphandle kolunye uqhubekeko kude kube kusenokwenzeka ukuba kucinyiwe.
Lonke ulwazi lomntu uqokelelwa kusetyenziswa unxibelelwano olukhuselekileyo lwe-HTTPS kwaye lugcinwa kwindawo ekhuselekileyo engagcinwanga kulo naluphi na ukusetyenziswa okungagunyaziswanga.
Siphumeze amanyathelo ayilelwe ukukhusela idatha yakho buqu ekulahlekelweni ngengozi nasekufumaneni okungagunyaziswanga, ukusebenzisa, ukutshintsha kunye nokudiza.
Ukhuseleko kunye nolwazi lwakho lixhomekeke kuwe. Apho sikunike khona (okanye apho ukhethe khona) iphaswedi yokufikelela kwiindawo ezithile zewebhusayithi yethu, unoxanduva lokugcina le mfihlo liyimfihlo. Siyakucela ukuba ungabelani nge-password yakho nabani na. Siyanibongoza ukuba nikulumkele ukunikezela ngolwazi kwiindawo zikawonkewonke zewebhusayithi ezinjengeibhodi zemiyalezo. Ngelishwa, ukuhanjiswa kolwazi nge-intanethi akukhuselekanga ngokupheleleyo. Nangona sisenza konke okusemandleni ukukhusela iiNkcukacha zobuqu, asinakuqinisekisa ukhuseleko lweDatha yakho yobuNtu edluliselwe kwiwebhusayithi yethu. Nakuphi na ukuhanjiswa kweDatha yoBuntu kumngcipheko wakho. Asinaxanduva lokuthintela naluphi na useto lwabucala okanye amanyathelo okhuseleko aqulathwe kwiwebhusayithi. Unganceda ukukhusela idatha yakho yobuqu kunye nolunye ulwazi ngokugcina igama lakho eliyimfihlo kwiwebhusayithi yethu.
ukurhoxisa ekufumaneni ii-imeyile zentengiso ezithile kuthi. Nangona kunjalo, nokuba ungabhalisa, kungafuneka sinxibelelane nawe ngamaxesha athile malunga nemicimbi enxulumene ne-akhawunti, okanye uhlaziyo lomgaqo-nkqubo ololu hlobo;
ukukhubaza iicokies kunye nokulandela umkhangeli wakho;
"ukungabhalisi" iakhawunti yakho kwiphepha lakho leakhawunti, eya kuthi ikhutshwe ngokusisigxina kungekudala;
ukucela ikopi yedatha yakho yobuqu egcinwe nguNATVISA.COM kuwe kwiNATVISA.COM ngokunxibelelana nathi ngqo;
ukucela ukuba i-NATVISA.COM ilungelelanise naluphi na ulwazi kwi-NATVISA.COM ukuba ifunyaniswe ingachanekanga okanye iphelelwe ngumhla, ngokunxibelelana nathi ngqo;
ukucela idatha yakho yobuqu icinywe apho kunganyanzelekanga ukuba sigcine idatha yakho ngokunxibelelana nathi ngqo;
ukurhoxisa imvume yakho ekuqhubeni idatha yakho ngalo naliphi na ixesha ngokuqhagamshelana nathi ngqo;
ukuphikisa ukuqhubekiswa kweenkcukacha zakho ngokunxibelelana nathi ngqo;
ukusibuza ukuba sicacisa okanye siphendule imibuzo enxulumene noMgaqo-nkqubo wethu wabucala;
Nxibelelana nathi ngqo kule [email protected];
Utshintsho kuMgaqo Wethu Wobumfihlo
Lo Mgaqo-nkqubo wabucala unokutshintshwa nangaliphi na ixesha. Utshintsho kule Mgaqo-nkqubo wabucala luya kuthunyelwa kwi-NATVISA.COM. Ukuba lutshintsho olubonakalayo, njengakwindlela esisebenza ngayo okanye esabelana ngayo nedatha yakho, siya kunxibelelana nawe kwiiNkonzo zethu, ezinje nge-imeyile okanye unxibelelwano olufanayo.
Ukuba senza iinguqu ezibonakalayo kwindlela esibaphatha ngayo abasebenzisi bethu 'iNkcukacha zobuqu, siya kukwazisa nge-imeyile kwidilesi ye-imeyile echazwe kwiakhawunti yakho. Umhla wale Mgaqo-nkqubo wabucala wagqityelwa ukuhlaziywa uchongwe ngaphezulu kwiphepha. Unoxanduva lokuqinisekisa ukuba sinayo i-imeyile entsha kunye ne-imeyile esebenzayo nehambisayo, nokutyelela iwebhusayithi yethu rhoqo kunye nale Mgaqo-nkqubo wabucala ukukhangela naluphi na utshintsho.
Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, iinkxalabo, izikhalazo, okanye iingcebiso malunga neMgaqo-nkqubo wethu wabucala, unazo naziphi na izicelo ezihambelana neDatha yakho yobuqu ngokuhambelana nemithetho esetyenziswayo, okanye kungenjalo kufuneka uqhagamshelane nathi, ungaqhagamshelana nathi kwaNATVISA.COM.